Akụkọ - Mịnịstrị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi mejupụtara iwu ọhụụ gbasara ụkpụrụ gburugburu ebe obibi maka arịa ụlọ
Ministri na-ahụ maka gburugburu ebe obibi mejuputara iwu ọhụụ nke usoro nchekwa gburugburu ebe obibi maka arịa ụlọ
Na Febụwarị 1, Mịnịstrị na-ahụ maka nchekwa gburugburu ebe obibi wepụtara "teknụzụ chọrọ ihe eji achọ ngwaahịa maka gburugburu ebe obibi (HJ 2547-2016)" ka emebere ya n'ụzọ iwu, na "akụrụngwa chọrọ teknụzụ maka ngwaahịa ịdebanye aha gburugburu ebe obibi" (HJ / T 303-2006) .
Ngwongwo ụlọ ga-enwe akara ngosi gburugburu ebe obibi
Standardkpụrụ ọhụrụ ahụ na-akọwapụta okwu na nkọwapụta, ihe ndị bụ isi, ihe ndị dị na teknụzụ na ụzọ nyocha nke ngwaahịa ịdebanye aha gburugburu ebe obibi. Ọ dị maka arịa ụlọ, gụnyere arịa osisi, arịa ụlọ, arịa plastik, arịa dị nro, arịa rattan, arịa ọla iko na arịa ndị ọzọ na ngwa, mana ọkọlọtọ anaghị emetụta ngwaahịa kabinet. Aghọtara na ụdị ọkọlọtọ ọhụrụ a na-agbasakarị ike, tinyekwara ọtụtụ ihe nchebe gburugburu ebe obibi. Mgbe emejuputara ọkọlọtọ ahụ, ngwaahịa ụlọ ndị na-agbaso ụkpụrụ ahụ ga-enwe akara nchedo gburugburu ebe obibi, nke na-egosi na ngwaahịa ahụ abụghị naanị na ọ dabara ogo ngwaahịa na nchekwa nchekwa kwekọrọ na ya, kamakwa na-ezute nchedo gburugburu ebe obibi nke mba na usoro nke mmepụta ma jiri.
Standardkpụrụ ọhụrụ ahụ na-abawanye ihe achọrọ maka akụrụngwa nke akpụkpọ anụ na akpụkpọ anụ, na-eme ka ihe ndị achọrọ maka mgbake na ọgwụgwọ na usoro mmepụta, na-edozi ihe ndị a chọrọ maka njedebe nke ihe ndị na-emerụ ahụ na ihe mkpuchi ihe eji eme ihe, ma na-eme ka ihe achọrọ maka oke nke ihe nwere ike ịfefe na phthalates na ngwaahịa.
Standardkpụrụ ọhụrụ ahụ na-akọwapụta ọtụtụ nkọwa
Standardkpụrụ ọhụrụ ahụ chọrọ na na usoro mmepụta, ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ụlọ kwesịrị ịnakọta ma na-emeso ihe mkpofu sitere na nhazi ọkwa; na-anakọta ma na-emeso sawdust na ájá na-enweghị ọpụpụ kpọmkwem; na usoro mkpuchi, ekwesịrị iji usoro nchịkọta gas dị irè ma gwọọ mkpofu gas anakọtara.
N'iburu ihe nchebe gburugburu ebe obibi nke nkọwa ngwaahịa dị ka ihe atụ, nkọwapụta ngwaahịa akọwapụtara na ọkọlọtọ ọhụrụ kwesịrị ịgụnye: ogo nke ngwaahịa na ọkọlọtọ nyocha ọ dabere na ya; ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka a chịkọta ngwá ụlọ ma ọ bụ ngwa, enwere ntụziaka ọgbakọ na eserese ahụ; ntuziaka maka ihicha ma jigide ngwaahịa na ihe dị iche iche site na ụzọ dị iche iche; ihe eji arụ ọrụ na ngwaahịa ndị bara uru maka gburugburu maka ịmegharị na mkpofu Ozi.